काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भएको भेटमा प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाउन दबाब दिएका हुन्। यद्यपि बैठकको मिति भने तय भएको छैन।
अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच करिब ११ दिनपछि आज भेटवार्ता भएको हो। नेकपा स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षबीच पछिल्लो समय विकसति घटनाक्रममा आजको छलफल केन्द्रीत रहेको थियो। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतहरुको सिफारिस, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुख सामान्तकुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेट र पर्सा घटना लगायतका विषयमा पार्टी भित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
उक्त विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो धारणा राखेका थिए। पार्टी भित्र विवादको रुपमा देखिएका यी विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल गरिनु पर्नेमा प्रचण्डले जोड दिएका हुन्। ओली-प्रचण्डबीच कात्तिक ४ गते कर्णाली प्रदेशको विवाद सल्ट्याउने सन्दर्भमा भेट भएको थियो। त्यस यता उनीहरुबीच संवाद रोकिएको थियो। लगातार ओलीले वार्तामा बस्न आग्रह गरेपछि प्रचण्ड शनिबार अर्का अध्यक्षसँग भेटका लागि बालुवाटार पुगेका हुन्।
बुधबार प्रचण्डलाई भेट्न अर्थमन्त्री एवम् पार्टी महासचिव विष्णु पौडैल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अलग-अलग समयमा खुमलटार पुगेका थिए। बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली खुमलटार पुगेका थिए। खुमलटार पुगेका सबैजसो ओलीनिकट नेताहरूले दुई अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प नरहेको सुझाव दिएका थिए। बालुवाटार जानु अगाडि प्रचण्डले नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। अहिले ओली र प्रचण्डबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा वार्ता भइरहेको हो।
भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली महाधिवेशनबाट निर्वाचित थिएनन् ?
कोरोना संक्रमित २२ वर्षीया युवतीको मृत्यु
संविधानको सर्वोच्चता मान्छु, कम्युनिस्ट प्रणाली मान्दिनँ : ओली
विद्यालयमा विद्यार्थीलाई दिइने सजायको स्वरूप बदलियो
महासचिवले बैठक रोक्ने काम गर्नु हुँदैन : वामदेव गौतम
बजारमा हिरोका १९ मोडलका बाइक र स्कुटर : कुनको मूल्य कति ?
शुद्धपानी प्रदेशका सबै जनतामा पुर्‍याउँछौं : मन्त्री चौधरी